विद्यार्थीहरूको लागि साइड अफिस - कुन कुरा बोल्छ र एक विद्यार्थीको कामको बारेमा
बालबालिका र किशोरीहरूको लागि साइड कार्यहरू
छोराछोरीका लागि एक अर्काको कस्ता कामहरू छन्?
यदि बच्चाहरु लाई एक विशेष इच्छा छ कि सजिलै संग पूरा छैन, उनि पनि आफु को वित्त को लागि विचार प्राप्त गर्दछ। तैपनि प्राथमिक विद्यालयका छोराछोरीले दादीमा काम गरे, यार्ड झापा र जेबको पैसाको बाहेक यूरोको लागि फर्केर हेरे। अर्कोतर्फ, घर भित्र बालबालिकाको कोठा सफा गर्ने टिप्पणी र यो पनि बच्चाहरु संग कुनै पनि गलत छैन "बाल श्रम मनाइएको छ" अचानक स्वैच्छिक रूपमा जेबको पैसाको संभावना द्वारा उत्प्रेरित हुन्छ।
छोराछोरीले कहिलेकाहीं अंशकालिक काम स्वीकार गर्न सक्छन्?
प्रश्न मात्र होइन, तपाईं कहिले, तर पनि, जब तपाईलाई अनुमति दिनुहुन्छ? निस्सन्देह, यो सँधै साना गतिविधिहरु जुन उमेर-उपयुक्त छन् र कुनै थकाउने रोजगारको लागी नेतृत्व गर्दैन।
बच्चाहरूको लागि अंशकालिक कार्यहरू उपयोगी छन्?
तथापि, बच्चाहरू वृद्ध हुन्छन्, तिनीहरू पनि एक उचित विद्यार्थी कार्यमा लिन चाहन्छन् र त्यसपछि अनुमति दिइएका प्रश्नहरूको प्रश्न साँच्चै मिति सम्म छ।
यदि बच्चाहरू अहिले सम्म 13 वर्ष पुरानो छैन भने, उनीहरूलाई काम गर्न अनुमति छैन किनभने "युवा संरक्षण अधिनियम" ले यो व्यवस्था गर्दछ
13 वा 14-वर्षीयले आफ्ना आमाबाबुको अनुमतिको साथ केहि कमाउन सक्दछ, यो एक सजिलो काम हो जसले प्रदान गर्दछ स्कूलको प्रदर्शनलाई असर गर्दैन।
यसको विपरीत, 15-18 किशोरीहरूले दिनहुँ 8 घण्टा सम्म काम गर्न अनुमति दिन्छन् तर तापनि वा शोरमा कुनै पनि भारी, खतरनाक वा तनावपूर्ण गतिविधिहरू छैनन्।
कुन बच्चाहरूले 13 वर्ष पछि कमाउँछन्, तिनीहरूले कर तिर्न सक्दैनन्, जबसम्म आयले 450 यूरो एक महिना भन्दा बढी नाघ्दैन। तथापि, आमाबाबुले "योजक वा क्लाइन्ट" लाई निश्चित रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि उनीहरूलाई लम्बाई योगी बीमाको साथ छुट्याउँछ।
न केवल केटीहरु तर केटाहरु पनि यो उमेरमा धेरै सहयोगी छन्। तिनीहरू पुरानो व्यक्तिहरूलाई किनमेल गर्न वा तिनीहरूसँग हिड्न मद्दत गर्न चाहन्छन्। साथै साना छोराछोरीहरूको हेरचाह गर्दै वा अखबारहरू लिँदै किशोरहरूको लागि प्रायः व्यावहारिक क्रियाकलाप हो। 13 र 15 वर्षहरूको बीचमा उनीहरूलाई दुई घण्टाको लागि यो गर्न अनुमति छ, तर केवल साँझ सम्म 18 घडी।
यदि बालबालिका र किशोरले आफ्नो पहिलो सम्पर्क कामको संसारसँग बनाउछ भने, यसले सकारात्मक नतिजा पाउन सक्छ।
सानो जेबको पैसाले उनीहरूले कमाएको भए तापनि तिनीहरू पनि एकअर्काको लागि प्रतिबद्धतालाई के जस्तो देख्न सक्छन्। र यदि त्यहाँ यसको लागि पैसा छ भने, तिनीहरू जान्दछन् कि कसरी यसको लागि काम गर्ने। यो पछिल्लो ह्यान्डलिङको लागि प्रभावकारी हुन सक्छ।
साथै, तिनीहरूले काममा लिने जिम्मेवारी धेरै निर्देशक हुन सक्छन्। वृद्ध छोराछोरी वा किशोरीहरूले उनीहरूको यस्तो अंशकालिक वा ग्रीष्मकालीन कामको माध्यमबाट कस्ता व्यावसायिक रुचिहरू पत्ता लगाए। छोराछोरी जो काम गर्न सिक्नु पनि जान्दछन् कसरी खाली समय महत्त्वपूर्ण छ।
काम गर्ने विरुद्ध बोल्ने कारणहरू
निस्सन्देह यो बच्चाहरु लाई एक फरक काम को लागी एक हानिकारक हुन सक्छ। आमाबाबुले निश्चित रूपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ यदि बालबालिकाले समय-समयको काम गरेर स्कूल वा परिवारलाई बेवास्ता गर्दछ। यदि तिनीहरू मात्र फेला पार्न सकिन्छ जहाँ तिनीहरू काम गर्छन्, यो पनि घरमा बेमेलको संकेत हुन सक्छ।
कुनैपनि अवस्थामा, बच्चा शारीरिक रूपमा समाप्त हुन्छ भने आमाबाबुलाई कार्य रोक्न र केवल थकित रूपमा वरिपरि फाँसिन्छ वा मानसिक परिवर्तनहरू देखाउँछ। पैसा बनाउन विद्यार्थीहरूको लागि पनि मनोरञ्जन छ, तर जब पैसा उपभोक्ता व्यवहारमा परिवर्तन हुने हुन्छ।
बच्चाहरु को लागि लफ्ट बेड | घर र अपार्टमेट
बच्चाहरु को लागि गृह उपचार | स्वास्थ्य रोकथाम